Saturday June 27, 2020 - 13:55:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dad badan ayay la yaab ku noqotay qalalaasaha Mareykanka ka socda maalmahaan.Haddaba an wax yar ka bidhaamiyo anigoo taariikh gaaban ku billaabaya, waxna ka dhaho hogaankiisa dowladnimo.
Mareykan waa wadan ku dhismay xoog iyo xasuuq, kadib markii dadkii abaaraha iyo dagaal diimeed ka Yurub ka soo qaxay, baabi’iyeen dadkii cascasaa ee dhulka deganaa qarniyo. Yurubtii wadanka qabsaday , markii ay degeen,waxay noqdeen xoola dhaqato (cowboys), beeraley iyo kuwa alwaaxda dhirta ka jarta. Laakiin qarnigii 19 and 20 ayaa Yahuud ka soo qaxday bariga iyo qalbeedka Yurub ka daba yimaadeen. Yahuudu waa ka ilbaxsanaayeen lo’layda cadaanka ah, waxay dageen magaalooyinka.Sanado ka dib waxay la wareegeen ganacsigii, waxay sameeyeen warshado dharka tola, Bankiyo, iyo jaamacado falsafadooda lagu dhigo. Kadibna waxay dhexgaleen kaniisadihii iyagoo u qoray kitaab bible Evangelical ah, kaas oo ay ku qoreen in qofkii Yuhuuda caawiya uu Illaah isagana caawin doono.Nabiciisana uunan imaaneyn illaa yahuudu dhulkii barakeysnaa ee Baytul Maqdis ku noqoto.
Biloowgii qarnigii Labaatanad ,mareykan waxa uu ku dhacay gacan yahuud, dhinac kasta dhaqaalo ,siyaasad , iclaam iyo bulshaba.Waxay cagaha iskugu dhufteen dhaqaalihii mareykanka , sanadkii 1939-1933 (great depression).Illaa cadaankii wax ay cunaan waayeen, dowladuna qarashaadkii bixin weyso.dowladdiinaku qasbanaatay indeyn ballaayiina ribo xad dhaafa saarantahay ka amaahdeen tujaartii yuhuuda, loona sharciyeeyay in Federal Bank uu madax banaan yahay lagactana ay daabaci karaan.Waxaa kaloo loo ogolaaday in wasiirka dhaqaalaha iyaga laga dhiqo mar kasta. Intaas ka dib, waxa ay noqdeen hogaanka dhabtaa ee mareykanka kontroola ( invisible Hands). Laga soo bilaawo maamulkii Nixon illaa hadda waxay si toos ah mareykanka waxaa u maamula yahuud, cid ay iyagu soo xulina wax awooda ma yeelato.Nus qarnigii dahabiga ee yahuud soo mara ayay ugu yeeraan.
Yahuudu siyaasada is ma raacsana, kuwa bariga Yurub ka yimid, kuwa milmay, ama guursaday dadkale, kuwa diimaha kale qaatay iyo kuwa diinta ka baxay (liberal) , waxaa loo arkaa in aay ka hooseeyan yahuuda dhiigooda dhowrtay . Kooxdaan dhamaantood xisbiga Dimoqraatiga ayay ku urursan yihiin iyagoo dadka laga tirada badanyahay sida madowka, Lag roonayaasha iyo Latiinka salka la galay.
Yahuudi ka timid Jarmalka iyo Ingiriska waa kuwa isku heysta in ay dhalad yihiin.Waa kuwa diinta ku dhegan, waa kuwa aaminsan in ay yiihiin kuwii Illaah doortay, adduunkana iyaga in ay xukumaan loo abuuray, dadka kale waxay u yaqaanaan (Gentile). Kooxdaan xisbiga Jamhuuriga ayay ku daba fayshanyihiin, waxayna gadaal marsadeen kirishtanka xaqjirka ee Avengelicalka yahuuda u adeega.
Xisbiyada Jamhuuriga iyo dimoqraadiga hal siyaasad ayay ka duuli jireen marka ay timaado siyaasada arrimaha dibadda,dhaqaalaha(capitalism), iyo masiirka mareykanka, cid bedeli kartana ma jirtin lakiin qaabka ayaa kale duwanaa. Nin kasto oo la doortana jidkaas ayuu raaci jiray, haddii kale meel uu maro ayuu weynaa.
Sanadkii 1960kii Yahuudi markii ay garwaaqsatay in Mareykan gacan ugu jiro, waxaay qorsheysay sidii adduunka oo dhan lagu qabsanlahaa iyagoo la soo baxay buugoodii qarniyo u qarsoonaa ee (Qorshihii Weynaa ee Yahuuda) iyadoo fikirkaas uu horbooday wasiirkii arimaha dibadda xilligii Nixon , Dr.Herry Kisinger oo ah qabiir maakira. Waxa uu dejiyay waxa loogu yeero New World Order ama(Globilization ) oo micnuhu yahay caalamka hal tuulo oo aan xukuno aan ka dhigno caasimadda adduunkana halooga dhigo Beytul Maqdis.Qorshahaas waxaa ka mid ahaa in la xureeyo dhulkii illaah u yaboohay (Promised Land) oo u dhexeeya labada webi Niil iyo Furaat. Tijaabadii ugu horeysan waxay dhacday 1967 dagaalkii todobada berri ee Falastiin lagu qabsaday, iyo 1973 kii carab oo dhan lagu duleeyay illaa siinay iyo Golan heights ay ku qabsadeen, iyadoo xoog mareykan la adeegsanaayo.
Markii ay dagaalkaas ku guuleysteen ayaa Yahuudii kala fikir duwanaatay, sidii qorshahaas lagu wadi lahaa,Conservative (Jamhuuri) iyo Liberal (dimoqraati) ayay u kala jabeen. Waxay isku qilaafeen siyaasada la addeegsan ,jiritaan dowlada israaaiil, dhaqaalaha iyo masiirka dadka la xukumo.
Kooxda yahuuda la doortay aaminsan, waxay rabeen in siyaasada cagajugleyn iyo xoog la adeegsado maadaama mareykan iyo yurub gacanta ku hayaan. Dhanka dhaqaalahawadanka in dadka shaqaala faqri ah laga dhigo si aanay gacanta uga bixin.Iyadoo lagu shaqaaleysiinayo lacag yar, canshuurtana lagu kordhiyo si aanay weligood gacantooda uga bixin(modern slavery), tujaartana canshuur la’aan.Waxay kaloo aaminsanyihin in hantida lagu koobo yahuuda iyo wixii taageersan oo keliga inta kalana lagala dagaalamo in ay wax yeeshaan.
Kuwa diinlaawayaasha ee Xisbiga Dimaqraatiga gadaal iyagu waa ka halis badanyihiin, waxay aaminsanyihiin in aan la gaarin xiligii xoog wax lagu fulin lahaa, sababtoo ah Midowga Sofiyeeti ayaa caalamka nus ka heystay waqtigaas, waxay kaloo ay istuseen in dadka cadaanka ay ku kici karaan maalin, sidaas daraadeen waa in mareykan dad badan oo soo galooti ah la degiyo si looga tira bato, iyagana ay ku dhexdhuuntaan. Dhanka siyaasada arrimaha dibadda in la addeegsado laaluush, qiyaano been ah, xulufeysi, dhanka Israaiil in is balaariinta la hakiyo inta laga jiifinaayo carabta iyo islaamka, in maalgashi tartiib tartiiba caalamka lagula wareego, iyo dilal qarsoon lagu laayo wixii ka horyimaada, si looga miro dhaliyo qorshaha fog. Waxa kaloo ay aaminsanyihiin in adduunka inta diin la aaminsanyahay aanay qorshohoodu hirgeleen, sidaas daraadeen waa in dadka adduunka la fasahaadiya, waxay abuuran mashaaric sida isdhexgal si sinadu u badato, heesaha, ciyaaraha, dhalmada oo la yareeyo, qoska la burburiyo, qowmu luutnimo la fidiyo, wadamada caalamka lagu qasbo in ay hirgeliyaan wasaqdaas.Dowladdii fulin weydo laga shaqeeyo in loo dhameeyo.
Dhanka arrimaha gudaha waxay iska dhigaan in shaqaalaha iyo dadka danyarta ay taageerayaan ,wax badana kama duwana kuwa kale, waxa kaliya ee uga duwanyahay waa canshuurta oo ay wax yar ka dhimaan shaqaalaha, iyo iyagoo haweenka garoobada iyo ciyaalka raashin iyo xoogaa ceyr ah siiya sii reerku u burburo.
Qilaafkaas yar waxaa soo dhexgalay Golaha Yahuuda Caalamiga, iyagoo ku qanciyay in qoloba mar la fiiriyo qorshaheeda iyadoo hal yool la leeyahay, sidaas ayaana lagu weday in muddo ah.
Kadib burburkii Midowga Sofiyeeti (1991) ayaa waxaa is bedelay wax kasta, waxaana soo baxay Jiil yahuud dhalinyaro xaqjir (zahyuuni) ah, kuna indha baqsaday waalidkood oo laga daba hadlin. Kooxdii Conservitive (jamhuuriga) ayay ka hoos baxeen, iyagoo isku magacaabayNeoConservitive( muxaafidka cusub)waxaa horboodayay; Paul Wolfowitz (ninkii ciraaq burburiyay), Abraham Spencer( ninka Latin America xasuuqay lana wareegay dhulka mooska lagu beero), Rechard Perle (maakirka siyaasada dibada mareykanka haga), Bibi Netanyahu (raiiska yahuuda) iyo Paul Bremer ninkii Ciraaq xukumi jiray xilligii Bush.Jiilkaan cusub waxay arkeen in maanta ciid ka hor imaankarta aanay jirin maadaama Ruush burburay,
sidaas daraadeed waa in la dedejiyaa Boqortooyadii Yahuuda. Qorshaha cusub waa bariga dhexe iyo muslimiinta caalimka, waa xoog , ama anaga ama argagixiso,dagaalkeenu waa in uu ku saleysnaadaa diin iyadoo saliibiyiinta Avengelicalka laga dhaadhicinaayo in Nabbi Ciise (NNK)) uu soo degi doono haddii Baytul Maqdis caasimada yahuud noqoto.Dhaqaalaha waa in xoog lagu boobo, hantida adduunkain cid aan iyaga aheen ama saaxiib aheen laga illaaliyaa. Cid alle ciddii qorshahaan ka hortimaad waa in gafuurka laga jebiyo.Qorshahaan waxaa ka horyimid kooxdii Liberalka, illaa qilaafkii hanjabaado gaaray, laguna tilmaamo kuwa la mida daba dhilifyaddii Hilter la shaqeyn jiray markii yahuuda la laynaayay.
Qr: Casir Mooge (Abu Ceyna)